Etu esi tinye ma mee ka ebook ọ bụla kwekọọ na Kindle gị site na iji Telegram | Akụkọ akụrụngwa
Ruben gallardo | | ndị na-agụ akwụkwọ, Nkuzi
Agbanyeghị na Apple na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-achọ mgbe niile inweta akara achicha ha na ụlọ ọrụ e-akwụkwọ, ọ bụkwa eziokwu na enweela eze na ahịa a: Amazon na usoro ihe omuma ya. Nnukwu e-commerce ahụ amarala otu esi enweta nnukwu katalọgụ nke aha dijitalụ yana - yana opekata mpe - nye ndị ahịa ya ngwa ọrụ ka ha wee nwee ike ịnụ ụtọ akwụkwọ dị mfe.
Kpọmkwem, anyị pụtara Kindle na ụdị dị iche iche ya. Ha bụ otu ndị nye ezigbo ahụmịhe onye ọrụ ma ike agwụla anya gị ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-agụ ọtụtụ awa: Ha na-eji teknụzụ ink elektrọnik. Ugbu a, dị ka mgbe niile, enwere "mana" na ojiji ya. A na-ama gị ikpe iji akwụkwọ ntanetị oge niile.
Dika ekwuru otutu oge, ma dika Amazon kwuru otutu oge, ulo oru a na-erite uru na oru ya obughi site na ngwaike o na-ere. O yikwara ka ihe anaghị arụ ọrụ nke ọma. Otú ọ dị, Otu n'ime "nsogbu" nke Kindle bụ na usoro ha na-akwado bụ .MOBI. Ma ọ bụrụ na ị na-ahụkarị ụdị akwụkwọ elektrọnik a, ị ga-amata na e nwere ụdị dị iche iche n'ahịa ahụ yana usoro ntanetị ndị ọzọ na-egosipụta. Anyị na-ekwu .EPUB. Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ịzụta akwụkwọ elektrọnik - ebook - na mpụga Amazon ma ị nwere Kindle? Azịza ya abụghị ezigbo olile anya: ma ị ga-ahapụ n'enweghị anụ ụtọ ebudatara aha; ma ọ bụ na ị na-achọ onye ọzọ na-agụ; ma ọ bụ gbanwee usoro ahụ na Kindle dakọtara. Na nke a dị mfe ma ọ bụrụ na anyị ejiri bot site na ozi ngwa ngwa ama ama Telegram.
1 Iji Kindle Bot: ihe ịkwesịrị ịmalite iji ya
2 Tọọ Kindle To Bot na akaụntụ Telegram gị
3 Malite iji "Iji Kindle Bot" na Telegram
Iji Kindle Bot: ihe ịkwesịrị ịmalite iji ya
Ọ bụrụ na ị ka na-eche na Telegram bụ ọrụ nzi ozi ngwa ngwa, ị meghere. Ee ee, ọ dịkwa. Mana ọrụ a nwere ọtụtụ ohere karịa ka ị chere. Na mgbakwunye ịnwe ọwa n'okwu ọ bụla masịrị gị -ee, Ọ dịkwa mfe ibuga ihe ndị nwebisiinka-, ọ nwekwara ngwaọrụ ndị na-atọ ụtọ dịka nke anyị na-ewetara gị taa: Iji Kindle Bot.
Bots ndị a bụ ngwa ndị ọzọ nke na-arụ ọrụ n'ime usoro okike nke Telegram. Na nke a ọ na - arụ ọrụ na akaụntụ gị Kindle, nke ị meghere maka oge mbụ ịmalitere iji ikpo okwu ọgụgụ dijitalụ nke Amazon. Ọ dị mma, budata Telegram n’elu ikpo okwu ị họọrọ. Cheta na ị nwekwara ike iji ya site na ihe nchọgharị gị ma ọ bụ budata ngwa desktọọpụ ma nwee ike iji ya na kọmputa gị. Nke ahụ kwuru, ị ga-eme ya gbakwunye na Iji Kindle Bot na akaụntụ gị wee malite iji ya. Ma gịnị ka ịchọrọ iji hazie ya?
Tọọ Kindle To Bot na akaụntụ Telegram gị
A ga - enwerịrị ihe abụọ Telegram Bot mbụ a ga - agwa gị bido iji ya. Ihe ọzọ bụ, ozugbo ị gbakwunye ya na akaụntụ gị, ị ga-ahụ ntuziaka ndị dị na Bekee pụtara. Kedu ihe ọ chọrọ gị? Ihe mbụ bụ na ị ga-aza na-enyefe ihe ndekọ akaụntụ gị nkeonwe. Nke ahụ bụ, nke nwere usoro ndị a: username@kindle.com. Iji chọta kpọmkwem ihe adreesị ozi-e gị ahaziri bụ, banye na akaụntụ Amazon gị ma gaa na ngalaba menu ndọpụta "Jikwaa ọdịnaya na ngwaọrụ".
Dị iche iche taabụ ga-apụta, nke ikpeazụ bụ onye na-egosi "Ntọala". Pịa na ya na ngalaba «Nhazi nke akwụkwọ onwe gị» ị ga-ahụ ozi gbasara akaụntụ gị @ kindle.com. Ozugbo i zipụrụ akaụntụ a na Bot (Iji Kindle Bot), ọ ga-abụ oge iji tinye akaụntụ email nke ọrụ a na-enye gị.
A ghaghị itinye akaụntụ a na ngalaba nke «Ndepụta nke adreesị ozi-e nyere ikike iji zipu akwụkwọ nkeonwe». Nhọrọ a dị ntakịrị karịa nke gara aga. Ga-enyocha na akaụntụ email gị onwe gị ka achọtara. Tinye akaụntụ email ahụ nke na - agwa gị Iji Kindle Bot na ọ bụ ya.
Malite iji "Iji Kindle Bot" na Telegram
Ọ ga-abụ oge ịmalite iji ya. Chịkọta akwụkwọ ndị dị na .EPUB, dịka ọmụmaatụ, na ịchọrọ ịtụgharị iji nwee ike ịgụ ya site n'aka onye na-agụ akwụkwọ gị. Ziga faịlụ [s] na Bot na ntughari anaghị ewe karịa elekere abụọ. Gịnị na-emezi? Ihe niile gara aga anyị mere iji hazie Bot a bụ iji hụ na ozugbo ntụgharị na usoro .MOBI mere, a na-ebugo akwụkwọ ahụ na akaụntụ gị.
Ga-echere oge ole na ole tupu akwụkwọ ahụ apụta. Ma ọ ga-eme nke a na ngalaba Kindle document; nke ahụ bụ ịsị, n'otu ebe ebe a na-eziga ụdị faịlụ niile - na-abụkarị n'ụdị PDF - ka a ga-enyocha site n'aka onye na-agụ akwụkwọ a ma ama. Na mmechi, cheta Kindle enwere ike iji ya ma onye na-agụ akwụkwọ, na a mbadamba site na ngwa ọdịnala, na a smartphone ma ọ bụ site na kọmputa.
* Mara: site na Ngwa Actualidad anyị anaghị ahụ maka ojiji enyere Bot a. Anyi ghotara na ihe nile agbanwere na enwetala ya n'uzo iwu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Etu esi tinye ma mee ka ebook ọ bụla kwekọọ na Kindle gị site na iji Telegram
The bot na-agwa m na m nwere ike ịme mgbanwe 5 kwa ọnwa ...
Zaghachi Javier Mercadé
NVIDIA mechara kagbuo mmemme mmekọrịta ya na esemokwu